Cunto Cake Shukulaato ah (oo loogu talagalay Xardho) - Sugar Geek Show - Keega
Recipe Cake Shukulaatada (loogu talagalay xardho)
Kani waa keeg shukulaato aad u fiican oo leh dhadhan shukulaato badan oo qurxoon laakiin adag oo ku filan in loo isticmaalo naqshadaha keegga la xardhay iyo xardhan
Keegga shukulaatada ah wuxuu leeyahay dhadhan iyo muuqaal qurux badan laakiin waa adag yahay in loo isticmaalo keegag xardhan! Cuntadani waxay ka dhigeysaa laba wareeg 8 Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:25 daqiiqado Wadarta Waqtiga:35 daqiiqado Kalori:1375kcal
▢8 oz (227 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢shan iyo toban oz (425 g) Burka AP
▢1/2 tsp (1/2 tsp) budada dubista
▢2 1/2 tsp (2 1/2 tsp) Fixiso
▢4 oz (113 g) budada kookaha dabiiciga ah sida HERSHEYS
▢laba tsp (laba tsp) soosaarida vanilj
▢16 oz (454 g) biyo heerkulka qolka
FIIRO GAAR AH: WAA MUHIIM IN dhammaan waxyaabaha heerkulka qolka ee kor ku xusan ay yihiin heerkulka qolka oo aan qabow ahayn si maaddooyinka ay isugu milmaan oo ay si sax ah isugu daraan.
Foornada kuleylka illaa 335º F / 168º C.
Kudar walxo qallalan (bur, budada dubista, soodhaha, milix iyo kookaha budada) isku weel baaquli ah, ku garaac isugeynta oo meel dhig
Isku dar walxo qoyan baaquli oo dhinac iska dhig
Kudar subag si aad ugu istaagto isku darka oo ku garaac xawaare dhexdhexaad-sare ah illaa uu ka siman yahay oo dhalaalayo, illaa 30 ilbidhiqsi. Tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sonkorta, garaac ilaa inta isku dar ah ay tahay mid jilicsan oo ku dhow cad, qiyaastii 3-5 daqiiqo.
Ku dar ukunta midba mar, adigoo si buuxda isugu daraya ukun kasta ka hor intaadan ku darin tan xigta.
Iyada oo isku darka xawaaraha ugu hooseeya, ku dar qiyaas ahaan seddex meelood meel walxaha qallalan ee batteriga, ku xigo isla markiiba qiyaastii seddex meelood meel ka mid ah isku darka biyaha, isku dar ilaa maaddooyinka ay ku dhow yihiin in lagu daro qashinka. Ku celi hawsha 2 jeer oo dheeri ah. Marka baytarku u muuqdo mid isku dhafan, jooji qasiyaha oo ku xoq dhinacyada weelka saxanka leh caag.
U qaybi baytiyada si siman inta u dhexeysa digsiyada la diyaariyey. Ku jilciso dusha sare leh spatula caag ah. Keega duba ilaa ay ka dareemayaan adke xarunta dhexdeeda oo caday ka soo baxayo isagoo nadiif ah ama xoogaa jajab ah dul saaran yihiin, qiyaastii 35-40 daqiiqo.
Hubso inaad isticmaasho budada kookaha dabiiciga ah ama karintani ma noqon doonto.
Kalori:1375kcal(69%)|Kaarboohaydraytyada:171g(57%)|Protein:labaatang(40%)|Dufan:75g(115%)|Dufan Dufan:46g(230%)|Kalastarol:307mg(102%)|Sodium:2187mg(91%)|Kalibaalium:740mg(kow iyo labaatan%)|Fiber:kow iyo tobang(44%)|Sonkor:104g(116%)|Vitamin A:1685IU(3. 4%)|Kaalshiyamka:221mg(22%)|Bir:8.4mg(47%)
sida loo sameeyo fudfudud fudud oo jecel guriga
sida loogu qurxiyo keega miraha leh